Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarcheAmore
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMarcheAmore iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
ILa Roccaccia yakhiwa ngo-1080 AD njengenqaba yokujonga ukukhusela indawo yaseFermo. Ifakwe kwindawo enomtsalane phakathi kweMonte Sibilla, igophe le-Infernaccio kunye nedolophu encopho yenduli yaseMontefortino.
Namhlanje iLa Roccaccia yindawo yobumnandi enechibi labucala kunye nejacuzzi ebekwe phakathi kweentaba zeSibillini, eyenzelwe abo bafuna uxolo, ukuphumla kunye nokucamngca. Ipaki yayo izaliswe yimisebenzi yobugcisa kwaye kuyo iquka i-amphitheatre yabucala enombono owodwa.
Ukufikelela kule flethi kumgangatho wokuqala. Igumbi lokutyela, elinekhitshi elinyamalalayo emva kocango olutyibilikayo, lijonge ithafa apho iindwendwe zinokonwabela ilanga kunye nombono ongenakuthelekiswa nanto owakha umwonyo we-Infernaccio kunye neelali ezingqongileyo ezithe saa ezintabeni. Phezulu kukho igumbi elinye lokulala, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinebhedi yamaFrentshi kunye negumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo. Ngelixa kumgangatho wokugqibela kukho igumbi lokulala elongezelelweyo eliphindwe kabini, elinedome elinokuvulwa ngombane ukuze lilale phantsi kwesibhakabhaka esineenkwenkwezi, kunye negumbi lokuhlambela elineJacuzzi. Ukusuka kweli gumbi kunokwenzeka ukufikelela phezulu kwinqaba.
Indlu ifikeleleka ngokunyuka ukuya kumgangatho wokuqala. Igumbi lokutyela, kunye nekhitshi elinyamalalayo emva kocango olutyibilikayo, lijonge ithafa apho unokuyonwabela ilanga kunye nombono ongenakuthelekiswa nanto owenza isakhelo se-Infernaccio gorge kunye neelali ezihlala ezintabeni. Ukuya kumgangatho ophezulu sifumana igumbi elinye lokulala, igumbi lokulala elinesibini elinebhedi yaseFransi kunye negumbi lokuhlambela. Ngelixa kumgangatho ophezulu kukho igumbi lokulala elongezelelweyo eliphindwe kabini, elinedome enokuvulwa ngolawulo lombane ukuze ukwazi ukulala ngelixa uncoma isibhakabhaka esineenkwenkwezi, kunye negumbi lokuhlambela elineJacuzzi. Ukusuka kweli gumbi ungafikelela phezulu kwinqaba.
Imizuzu embalwa ukusuka eLa Roccaccia ungafumana ezona ndlela zintle zokukhwela intaba yeSibillini National Park. Ukusuka kwelo likhokelela encotsheni yeNtaba yeVettore, ukuya kuloo nto izisa iikresti zamathambeka eMonte Sibilla ukuya kwimiwonyo ye-Infernaccio. Kukho zonke iintlobo zeengoma ezifanelekileyo kuyo yonke iminyaka kunye nezakhono. Sikulungele ukukubonelela ngolwazi lokhenketho olukhokelwa lusuku olunye lolona uthanda kakhulu.
Imizuzu embalwa ukusuka eRoccaccia eyona ndlela intle yeSibillini National Park yesebe, ukusuka phezulu kweCarrier, ukuya kwiSibilla crest ukuya kwimiwonyo ye-Infernaccio. Kukho zonke iintlobo zayo yonke iminyaka, kwaye sikulungele ukucebisa okona kulungileyo kuwe.
Umbuki zindwendwe ngu- MarcheAmore
Le antiche dimore di (Website hidden by Airbnb) sono l’espressione dell’amore per le sue Marche, dal mare alle montagne, dal palazzo nobiliare di Fermo ad una rocca di avvistamento sui monti Sibillini, passando attraverso una torre delle fortificazioni medievali. In ognuna delle dimore si respira un’eleganza discreta dove la bellezza del tempo brilla incontrastata, dove ogni dettaglio esprime l’amore per l’arte e la cultura.
Le antiche dimore di (Website hidden by Airbnb) sono l’espressione dell’amore per le sue Marche, dal mare alle montagne, dal palazzo nobiliare di Fermo ad una rocca di avvistamento…
Abasebenzi bethu abayi kuba kwindawo ngexesha lokuhlala kwakho kodwa siya kufumaneka 24/7 hayi ngaphantsi. Singakunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nolungelelwaniso lwemisebenzi kunye namava anokuthi aqaphele kuphela umntu wasekhaya onjengathi.
Abasebenzi bethu abayi kuba khona kwisakhiwo kodwa baya kufumaneka 24/7 kuzo naziphi na iimfuno zakho. Siyafumaneka ukucebisa amava, imisebenzi yalo naluphi na uhlobo ngokweemfuno zakho.
Abasebenzi bethu abayi kuba kwindawo ngexesha lokuhlala kwakho kodwa siya kufumaneka 24/7 hayi ngaphantsi. Singakunika iingcebiso kunye neengcebiso malunga nolungelelwaniso lwemise…